Tale jeneralin'ny vondrona Ethiopian Airlines: Ny hoavin'i Africa Aviation
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Etiopia » Tale jeneralin'ny vondrona Ethiopian Airlines: Ny hoavin'i Africa Aviation
Andriamatoa Tewolde GebreMariam Ethiopian Airlines
Nandritra ny resadresaka nifanaovana dia niresaka momba ny vokatry ny COVID-19 coronavirus, ny zava-misy ankehitriny ary ny làlana mandroso ny tale jeneralin'ny Ethiopian Airlines.
Ny toe-javatra ankapobeny amin'ny fomba fijerin'ny fiaramanidina aty Afrika amin'izao fotoana izao.
Ny orinasam-pitanterana afrikanina dia tsy nanararaotra nitady fanampiana avy amin'ny governemantan'izy ireo amin'ny resaka vola fanampiana noho ny COVID-19.
Miorina amin'ny fivezivezena mihoatra ny fivezivezena ataon'ireo mpandeha fiaramanidina hiato sy hiantsoroka ny tetibola.
Peter Harbison avy amin'ny CAPA Live, niresaka tamin'i Tewolde Gebremariam, CEO an'ny Ethiopian Airlines, ao Addis Ababa mba hiresaka momba ny hoavin'ny fiaramanidina Afrika. Ity manaraka ity dia ny fandikana an'io adihevitra fampahalalana io.
Eny, efa elaela ary zavatra maro no nitranga nandritra izany fotoana izany. Tsy tsara daholo. Fa manantena isika fa afaka hijanona amin'ny fanamarihana tsara miaraka amin'izany. Lazao amiko, Tewolde, hanombohana, amin'ny fomba fijerinao mipetraka ao amin'ny foiben'ny Avaratr'i Afrika, tena ivon-toerana lehibe eo amin'ny ankamaroan'ny Afrika sy ny eran'izao tontolo izao, saingy Eropa sy Azia tokoa, inona ny toe-javatra ankapobeny amin'ny zotram-piaramanidina fomba fijery any Afrika amin'izao fotoana izao? Raha ny vokany eo aminao ny Coronavirus.
Misaotra, Peter. Mieritreritra aho taloha, araka ny fantatrao tsara, fa efa nanaraka ny indostria nandritra ny taona maro isika. Ka ny indostria atsy Afrika, ny [tsy henoina 00:02:05] aty Afrika dia tsy tao anaty endrika tsara na dia talohan'ny COVID aza. Ity dia indostria very vola, indrindra ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, very vola satria hoy aho enina, fito taona misesy. Ka tsy teo amin'ny toerany tsara indrindra ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rehefa tratran'izy ireo ity krizy iraisam-pirenena ity. Indostria iray izay tratra tamin'ny endrika ratsy be izy io. Ary na ny COVID aza dia nisy fiatraikany tamin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina afrikanina ary mbola ratsy lavitra noho ny ambin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina sy ny sisa amin'ny tany. Noho ny antony vitsivitsy.
Laharana voalohany, milaza aho fa ny firenena afrikanina dia naka fepetra faran'izay henjana amin'ny lafiny famaranana ny sisintany. Saika ny firenena afrikanina rehetra dia nanidy ny sisintaniny, ary maharitra ela koa izany. Hilaza aho eo anelanelan'ny volana martsa sy septambra. Izany dia nisy fiatraikany tamin'ny zotram-piaramanidina afrika satria saika ny orinasam-pitaterana an'habakabaka afrikanina rehetra dia niorina nandritra izany fotoana lava izany. Ka indrindra ny tsy fahombiazantsika tamin'ny tampon'ny fahavaratra dia midika zavatra betsaka amin'ny lafiny tsy fahazoana manohana ny asan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny antony hafa dia, etsy ankilany, araka ny fantatrao, ny habetsaky ny coronavirus any Afrika dia tsy dia ratsy loatra. Saingy ny tahotra, ny tahotra an'i Afrika izay manana serivisy ara-pahasalamana ambany dia ambany sy tsy manara-penitra, noho izany ireo firenena afrikanina dia niahiahy mafy ny tsy hahafahan'izy ireo manohana raha sanatria ny serivisy ara-pahasalamana dia ho tototry ny mararin'ny pesta. Ka noho io tahotra io dia nandray fepetra fatratra ny fanakanana sy ny fanidiana ny sisintany izy ireo. Noho izany antony iray izany, ary ela loatra no nanaovan'izy ireo izany raha ampitahaina amin'ny ambin'izao tontolo izao. Indrindra ny Eropa sy Amerika, izay somary antonony.
Ny iray hafa dia tsy nanam-potoana hitady fanampiana avy amin'ny governemantan'izy ireo amin'ny resaka vola fanampiana ny zotram-piaramanidina afrikanina, satria ny governemanta afrikanina sy ny toekarena afrikanina dia voan'ny areti-mandringana. Ka [tsy henoina 00:05:03] saika ho an'ny firenena afrikanina rehetra, seranam-piaramanidina toa… tena mampalahelo fa resy [SJ 00:05:11] izahay, zotram-piaramanidina tena lehibe, zotram-piaramanidina tena tsara. Air Mauritius sns. Ny hafa toa [tsy reko] koa dia nihena be. Noho izany, ny antony fahatelo dia tsy misy tsena renivohitra koa any Afrika, ka tsy afaka mivarotra fatorana izy ireo. Tsy afaka mindrana vola amin'ny banky na amin'ny andrim-panjakana toa an'i Eropa sy Amerika izy ireo. Holazaiko fa namely an'i Afrika ny ratsy, tena ratsy. Simba be.
ankehitriny Ethiopian Airlines, niresaka momba ny fomba tsy nahitam-bokatra ireo seranam-piaramanidina hafa nandritra ny taona maro, na ny indostria tamin'ny ankapobeny. Ohatra tsara amin'izany i South Africa Airways, heveriko fa. Saingy ny Ethiopian Airlines dia zavatra niavaka, na niavaka tamin'ny fividianana tombony nandritra ny taona maro. Ity dia tsy maintsy ho fihemorana lehibe sy lehibe kokoa ho anao eo anelanelan'ny sisa amin'ny Africa sy ny sisa amin'izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny, na aiza na aiza any Avaratra any Eropa na Azia. Midika izany fa mbola mazava ho azy fa eo amin'ny toerana matanjaka ianao. Inona no mahatonga anao handeha ary ahoana no fahitanao… hiresaka momba izany aloha izahay, fa avy eo ankoatra izany, ahoana no ahitanao ny toeranao rehefa manomboka mihatsara ny toe-javatra, toa izay tsy azo ihodivirana? Fa mandritra izany fotoana izany, ahoana no hitahirizanao ny vola?
Heveriko, araka ny nolazainao an'i Peter, ara-drariny fa nahavita tsara isika tao anatin'ny folo taona lasa teo amin'ny fahitanay 2025. Noho izany, folo taona teo anelanelan'ny 2010 sy 2020 dia tena tsara ho an'ny Ethiopian Airlines na eo amin'ny lafiny tombom-barotra, eo amin'ny mamerina amin'ny laoniny ny tombom-barotra ho an'ny fitomboana sy ny fanitarana, tsy amin'ny sambo ihany, fa amin'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny olombelona ihany koa. Noho izany, nametraka antsika amin'ny fototra tsaratsara kokoa, amin'ny toerana tsara kokoa hiatrehana io fanamby io. Farafaharatsiny mba misy toerana tsara kokoa noho ny mpiara-mianatra amintsika rehetra. Fa faharoa, mieritreritra aho tamin'ny volana martsa raha samy nikoropaka momba ny areti-mandringana ny rehetra ary rehefa nitangorona [tsy henoina 00:07:49] iray manontolo, dia heveriko fa nahavita tsara isika. Hevitra tena mamorona izany ny orinasam-pitaterana entana niroborobo, noho ny antony roa. Voalohany, azo esorina ny fahaiza-manao satria nidina tany ny fiaramanidina mpandeha. Etsy ankilany, ny fitaterana fitaovam-pitsaboana PPE sy ny fitaovam-pitsaboana hafa dia orinasa niroborobo hanohana sy hamonjy aina any Eropa, Amerika, Afrika, Amerika atsimo sns.
Noho izany, rehefa tsapa izany, dia nandray fanapahan-kevitra tena tsara izahay, fanapahan-kevitra haingana hananganana fahaiza-manao arak'izay tratra amin'ny asan'ny mpivarotra entana. Efa manana fiaramanidina miisa 12 isika, [mpitatitra tsy azo henoina 00:08:36] mpitatitra entana fito voatokana ary 27, 37 ny mpitatitra entana. Fa izahay koa dia nanamboatra an'ity fiaramanidina mpandeha ity ho any anaty entana amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo seza. Fiaramanidina 25 teo ho eo no nataonay [tsy henoina 00:08:53], ka izany dia fiakaran'ny vidin'ny entana amin'ny fotoana mety. Tena tsara tokoa ny vokatra. Avo dia avo ny fangatahana. Noho izany, nanararaotra izany fotoana izany tamin'ny fotoana mety izahay. Noho izany, nasehonay ny hakingana, ny hafainganan'ny fanapaha-kevitra, ny faharetana izay nanampy anay. Ary mbola manampy antsika hatreto. Noho izany, mba hamaliana ny fanontanianao dia manana vola mikoriana matanjaka izahay. Noho izany, mbola mitantana ny fivezivezena izahay ao anatin'ny loharanon-karena anatiny, tsy misy vola fanampiana na tsy mindrana noho ny trosa, ary tsy misy fandroahana na fihenan'ny karama. Noho izany, fampisehoana mahatalanjona izany, hoy aho, saingy izany dia satria nanangana fahafaha-manao anatiny mifanaraka amin'ny karazana fanamby isika tao anatin'ny 10 taona lasa. Noho izany, nanao asa mahatalanjona izahay.
Midika izany fa toa mahasambatra tena izany, saingy mieritreritra aho fa manetry tena tokoa ianao satria tena nanao asa miavaka nandritra ny taona maro. Moa ve ianao milaza, mba hahitana mazava tsara an'io, fa tena nanam-bola tokoa ianao?